Ninka xun naag xun buu helaa – Biyacade
Ninka xun naag xun buu helaa
​Ninka xun Naag xun buu heela.
Qof walba geedka ay beerata ayeey gurataa
Hadii aad tahay qof noloshiisa aan dumar la haasaawin alle dartiina udaayay islaamnimada muujiya dhowra anshaxa iyo akhlaada auuban alle dhabarkiisa wuxuu ka soo saaraa caruur wanaagsan akhlaaq badan una sama fala waalidkooda.
Alle wuxuu u sahlaa haweeneey la mid ah dhowrsan kana dhalatay ehel wanaagsan.
Hadii aad tahay nin jecel la haasaawida dumarka ka qeeyb galka xafladaha fisqigu hareereeyay, jecel fanaaniinta anshaxa daran had iyo jeer na raadiya dumar habeen la seexad ah, noloshiisa aan ku dabaqin alle ka cabsi waxa uu helaa cauur asaga la mid ah jecel haasaawaha raga gurigiisuna waxaa kubyaraan doona awlaada kuwooda wiilasha.
Badanaa waxaa la sheegaa Ragga kooda sinada badan in aysan eheen kuwa tarma yeesha farac tira badan waloow qadar alle jirana hadana dadku weey kala wanaagsan yihiin qaar buu alle ka soo saaraa farac mug iyo muuqaal ba leh halka kuwa kalana ay dabat go’aan
Dadka qaar baa aaminsan in aabaha ku dhalay qudha aaba yahay balse waxa jira aabe nuuc kale ah oo aan ku dhalin aabe kuu ah
Tusaale cali abii daalib oo ahaa nin xikmad badan alle ka raali noqdee aya yir: من علمك حرفاواحد فهوابوك فى الدين Ruuxii ku bara hal xaraf oo kaliya waa aabahaaga diinka , Cali wuxuu kala jeeday dhanka cilmiga qofka ku bara.
Waxaa halkaa ka cad in aysan dabar go’in aabayaalka Diinka.
Abii hureeyra waxaan filayaa in dhamaan islaamku magaciisa yaqaanaan illeen waa aabihii axaadiista.
Hadii aan ku soo laabto sheekadeyda #Ninka xun Ama #Naagta xun in alle uu ka hadlay.
Alle ayaa quraankiisa ku sheegay gabaha xun iyo wiilka xun
Alle wuxuu yiri
Aayada halkaan idin kaaga muuqata wuxuu alle ku bilaabay Gabadha sababtoo ah cumaan dhan waxeey ka timaada gabadha.
Markii la hadlayaya Tuuganima alle waxa uu ku bilaabay Ragga sababtoo ah kuwa wax dhaca wa Ragga.
Si kastaba waayahaan dambe waxaa caada noqotay gabadha oranaya yaa wax iga qaadi kara balse anigu lama yaabin gabdhaasi waxaan se la yaabay waalidkii dhalay walaal kii la dhashtay iyo ehel kuwa xiga si dhiira galinta leh ay ugu amaanayaan xymaanta ay ku dhaqaaqayaan.
Waxaa kaloo iyana meesha aan ka marneyn caruurtii #siyaad_Barre soo bar baariyay ee walacada ahaa oo dibada galay magaca soonaalidana nala wadaagay noqday na nasab markii ay qurbaha galeen.
Waxaa la sheegaa wacalku badana wanaaga uma janjeersado waloow caalin uu noqon karo.
Fariinteyda waxaan ku soo koobayaa una dirayaa gabdhaha naftooda Ragga u dhiibaya bilaa guur kuwa bilaa asturaada ah ee Facebook ha ogaadeen Raggu waa ma naxe bilaa asluub ah waraabaha hadii aan yac la’ oran Arigu wuu lewtnayaa.
Raggu waa waraabe yac iska dhaha yeeysan idinka faaaiideysan.
Guurka badiya, nin qurux badan wax ba idiin ma taro naftiina undhioba kan daacada ka tahay guurka.
Guurka ayaa idiin ah liibaan.
Aakhirana alle aya janna idin sinaya.
Nabigu wuxuu sheegay #NNKH in qofkii Carabkiisa iyo farjigiisa ka adkaada janna uu u balan qaadayo.
Raaxada dunida wa in yar 100 sano gaari meysid kaa hor baa la tagay adiguna waad tageeysaa,
Shalaay wax kuuma taro ka ilaali jirkaada Ceeb aduunyo iyo cadaab aakhiro.
Previous Ciid wanaagsan meel walba oo aad joogtaan
Next Shan naagtaada ayaa kuugu nacda